Daawo: War-murtiyeed ka soo baxay shirkii odayaasha dhaqanka ee Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Daawo: War-murtiyeed ka soo baxay shirkii odayaasha dhaqanka ee Muqdisho
Daawo: War-murtiyeed ka soo baxay shirkii odayaasha dhaqanka ee Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Shir maalmihii u dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho Odayaasha dhaqanka Beelaha Soomaaliyeed iyo qaar kamid ah culimada ayaa waxaa laga soo saaray war-murtiyeed si weyn loogu taageeray Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, looguna digay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo.
War-murtiyeedka kasoo baxay shirkaas ayaa waxaa lagu sheegay in awoodaha Ra’iisul Wasaare Rooble loo igmaday ay tahay arrimaha doorashooyinka iyo amniga, taasina lagu tixgeliyo.
“Shirweynaha wuxuu adkeynayaa in laga fogaado wax walba oo dhabar jabin kara habsami u socodka shaqada qaranka ee uu hormuudka ka yahay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble,” ayaa lagu yiri warmurtiyeedka.
“Maamul goboleedyada qeybta ka ah dowlad federaalka inay dhowraan shuruucda dalka, kana fogaadan wax walba oo dib u dhac ku yimaada kara doorashada dalka. Wuxuuna shirweynaha kula talinaya madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday inuu ilaaliyo sharciga.”
Sidoo kale waxa qeyb kamid ah war-murtiyeedka lagu sheegay in loo diyaar garoobo in la dhowro dimuquraadiyada iyo dowladnimada haddii uu madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhago adeego baaqyada uga imaanaya beesha caalamka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
“Shirweynuhu waxa uu madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday uga digayaa inuu joojiyo is hortaaga uu ku hayo kiiska cadaalad u helida sarkaalada Ikraan Tahliil Faarax, kana waantoobo hab-dhaqanka aan shacniga ku dhisneyn ee ku difaacayo eedeysanayaal loo haysto dil, barakac iyo is-hortaaga doorasho xor iyo xalaal ah.”
Ugu dambeyntiina waxay bulshada ugu baaqeen inay iskugu soo baxaan mudaharaad lagu taageerayo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo looga soo horjeedo tallaabooyinka jar iska tuurka ah ee Farmaajo.